> Resource > Video > Audio shawladda: Sida loo Waraaqda Audio ka Video
Waxaad video ah oo ay ku jiraan soundtrack weyn in aad jeceshahay in aad u soo saaro si aad u maqashid dhawaaqa isticmaalaya warbaahinta ciyaaryahanka - MP3 ciyaaryahan la qaadi karo, tusaale ahaan. Taasi waxay noqon kartaa shaqo aad u sahlan haddii aad isticmaasho video xirfadeed sixiddiisa software- Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Just raac tilmaan-Macdan audio ka video fudayd.
Ku rakib oo ay maamulaan this Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor). Markaas riix "Import" badhanka si ay u helaan oo u dari diirada video aad. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi video ah barnaamijka. The video ku raran yihiin maktabadda warbaahinta la soo daabici doonaa sida sawirka soo socda ayaa muujinaya.
2 Bilow soo saarida audio ka video
Ka dib markii ay soo degida video in Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), jiidi video ka maktabadda warbaahinta in ay Jadwalka video ah. Waxaad markaa xaq u riixi kartaa video clip iyo dooran "Audio fuji" Macdan audio ka video. Ka dib markii a halka, video iyo maqal ah lagu soo bandhigi doonaa in kuwan raadkaygay kala duwan. Haddii aadan rabin in ay sii file video ah, xaq waxa guji iyo dooran "Delete" inaad ka saartid ka waqtiga video ah.
3 Edit audio haddii aad rabto
Markaas laba jibbaar riix si aad xaalkaa audio ee suuqa kala pop up. Halkan waxa aad ka bedeli kartaa mugga, libdhi in, libdhi soo baxay, oo Pitch, iwm sida aad jeceshahay. Haddii aad rabto in aad tirtirto oo qayb ka ah audio ah, kaliya ku dulqabo meesha aad jeclaan lahayd Kabcada_ inuu ku soo bilowdo oo riix badhanka "Split" kor ku xusan jadwalka. Dhamaadka ee deegaanka Kabcada_ sidoo kale calaamadeeyay - ciyaaro audio iyo dooro barta kama dambaysta ah ee aagga si ay u la saaray ka maqal ah wax soo saarka, ka dibna mar kale riix badhanka "Split". Ka sokow in, waxa kale oo aad ku dari kartaa inaad sanam u audio cusub ee soo bixiyay. Halkan waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan oo ku saabsan >>
4 badbaadi file maqal ah
Ka dib markii in, riix "Abuur" button inay u dhoofiyaan wadada audio. Halkan fursadaha kala duwan waxaa la siiyaa. Tusaale ahaan, waxaad badbaadin kartaa audio ee qaabab joogto ah sida MP3, MP4, wmv, AVI iyo wixii la mid ah ee "Qaabka" tab iyo qabsadaan goobaha ay sida Encoder, Rate Sample, Rate Inyar oo Channel sida aad jeceshahay. Mise dhoofin u loo maqli karo ee qalabka la qaadi karo, waxaa si toos ah u shidin DVD disc ama wadaagaan waa inay YouTube. Si fudud u dooro hab wax soo saarka la jecel yahay ka dibna riix "Abuur" badhanka si loo badbaadiyo wadada audio.